Ingmepụta weebụsaịtị Weebụ Na-abanye Na 2014 | Martech Zone
Kwa izu na Edge nke Web Radio pọdkastị, mụ na Erin kwusiri ike na mmejọ nke ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere bụ na ha kwenyere na saịtị ha bụ broshuọ dị n'ịntanetị karịa onye dị ndụ, onye na-eku ume. Mgbe gị na saịtị ahụ na-amị ukwuu ọdịnaya na-adịbeghị anya, Ugboro na mkpa… ị na-ewu ọkụ na nyere ndị mmadụ aka ikwere na gị na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị.
Ọ dịkwa mkpa iburu n’obi na ekweghị m inbound bụ dochie anya ọpụpụ usoro ahia na ire ahia. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eme ka ha abụọ daa ma na-arụkọ ọrụ ọnụ, ọ bụ ihe mara mma!
Lee ihe ozi sitere na Suyati na ahia ahia, na ihe ị chọrọ ime iji hụ na ebe nrụọrụ weebụ gị na-agagharị na ndị ọbịa n'afọ a:
Asịwo personas ikpebi otu ị ga - esi soro ndị ọbịa ọ bụla.
Enweghi ọdịnaya vs adịchaghị ọdịnaya maka mfe mgbaze.
Usoro nkwado na SEO, PPC, Blogs, Social Media, Akwụkwọ ịkpọ oku Webinar.
Kpọọ-na-Action (CTAs) iji mee ka ndị ọbịa banye na peeji nke ọdịda.
Ibe akwukwo iji mee ka mgbanwe gbanwee.
Idu Nurturing iji duzie ndị ọbịa ka ha bụrụ ndị ahịa.
Jide n'aka na-edebanye maka anyị okuku N'ezie na Inbound Marketing na aka ekpe ekpe, ọ bụ usoro izu 5 nke ga - eme ka ị gabiga akụkụ niile nke usoro ịre ahịa inbound nke ọma.
ngosi: Suyati bụ onye mmekọ nke anyị na DK New Media - ha enyerela anyị aka n’ọtụtụ ihu ma nwee ngwa ọrụ dị egwu maka imepụta ọdịnaya na njikwa usoro a na-akpọ Voraka na anyị ga-ede banyere ya.
Tags: ịde blọgụBlọọgụonye zụrụ yakpọọ ka emekpọọ n’ọrụctainbound marketinginbound weebụsaịtịndu nurturingWebinar Ahịaahia n'èzíppcnkwaliteAelekọta mmadụ media